Dhalashada St. Kitts iyo Nevis
Dhalashada St. Kitts iyo Nevis Passport-ka St. Kitts iyo Nevis
Dhalashada St. Kitts iyo Nevis - Sanduuqa Koritaanka Joogtada ah (SGF), codsadaha kaligiis ah
Dhalashada Saint Kitts iyo Nevis
Muwaadinnimada St. Kitts iyo Nevis - Qoyska Dakhliga Joogtada ah (SGF)
Dhalashada St. Kitts iyo Nevis • XULASHADA ADEEG
Lacag dhigashada St. Kitts iyo dhalashada Nevis
Faa'iidooyinka Saint Kitts iyo dhalashada Nevis
Barnaamijka 'St. Kitts and Nevis Citizenship' ee Barnaamijka Maalgashiga waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay midka ugu sumcad badan. Baasaboorka gobolkani wuxuu ikhtiyaar u noqon doonaa kuwa doonaya inay fursad u helaan inay booqdaan in ka badan 150 waddan fiiso la'aan (oo ay ku jiraan kuwa EU iyo UK), iyo sidoo kale inay hagaajiso canshuuraha. Waxyaabaha kale ee faa iidooyinka u ah barnaamijka dhalashada maalgashiga ee Saint Kitts waxaa ka mid ah waqtiyada dhaqsida badan, maqnaanshaha xaaladaha deganaanshaha dalka, iyo sidoo kale dammaanadaha sirta.
Maxay yihiin shuruudaha maalgashadayaasha?
U hogaansanaanta Da'da (18+)
Suurtagalnimada in la xaqiijiyo xaqiiqda rasiidka lacageed ee sharciga ah
Ku guuleysiga dadaalka
Si wadajir ah maalgashadaha, waxaa suurtagal ah in la soo saaro baasaboor loogu talagalay carruurta (da'dooda waa inaysan ka badnaan 30 sano), xaaska, walaalaha (walaalaha ka yar 30 sano), waalidiinta (ka weyn 55 sano jir). Isla mar ahaantaana, qaybaha liistada (oo ay ku jiraan carruurta ka weyn 18 sano jir) waa inay dhaqaale ahaan ku tiirsan yihiin maalgashadaha.
Lacag aan la soo celin karin Maalgashiga ugu yar ee lagu helo baasaboorka Saint Kitts iyadoo la adeegsanayo habkaan waa 150 kun oo doolarka Mareykanka ah. Haddii dhalashada loo malaynayo inaanay ku helin oo kaliya maalgashaha naftiisa, laakiin sidoo kale in ka badan 3 ku tiirsan, lacag dheeraad ah oo ah 10 kun oo doolarka Mareykanka ah ayaa looga baahan yahay iyaga.
Iibsiga hantida ma guurtada ah. Xulashadan helitaanka baasaboorka loogu talagalay Saint Kitts iyo Nevis waxay ku lug leedahay iibsiga dhismaha ee qaddarka 400 kun oo doolarka Mareykanka ah, iyadoo ku xiran lahaanshaha walxaha la soo qabtay ugu yaraan 5 sano. Sidoo kale waa suurtagal in la maalgashado 200 kun oo doolarka Mareykanka ah, laakiin kiiskan waxaa suurtagal ah in la iibiyo sheyga oo keliya 7 sano kadib. Liiska walxaha loo heli karo iibsashada ee ku hoos jira barnaamijka muwaadinimada maalgashiga ayaa oggolaatay dowladda.